Waxaan badanaa jeclaa fikradda Sarkaalka Dakhliga ee Madaxa bannaan oo isku waafajinaya suuq-geynta iyo iibinta hal waax oo isku-xidhan. In kasta oo aan aaminsanahay in weli ay mudan tahay, ayaa Madaxa Sarkaalka Teknolojiyada Suuq geynta waa suurtagal xiiso leh sidoo kale. Maaddaama aan la shaqeyno shirkado badan oo waaweyn, waxaa jira xiriir toos ah oo u dhexeeya shirkadda awood la'aanta inay si dhakhso leh u qaadato habab cusub oo ay u ilaaliso dhaqdhaqaaqa iyo waaxdooda tikniyoolajiyadda. Qaladku wuxuu u dhexeeyaa halista iyo abaalmarinta. Waaxaha IT-da ayaa maareynaya halista. Waaxaha suuqgeynta ayaa maareeya abaalmarinta.
Doorkan Madaxa Sarkaalka Teknolojiyada Suuq geynta waxaa qalinka ku duugay Buluug Kai. In kasta oo aanan hubin inuu jiro qof leh cinwaanka dhabta ah ee halkaas ka jira, haddana waxaa jira hubaal fuliyayaal badan oo suuq geynaya oo labada koofiyadood xidha. Adoo hubinaya in hal qof uu mas'uul ka yahay halista iyo abaalmarinta labadaba, waxaad heshay qof u dhaqaaqa sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan adoo hubinaya teknolojiyaddu inay tahay mid aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.